Ataovy hoe ny dihin'ny Prefe no niafarany - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Efa ambolana vitsivitsy izao hoy ilay tsy mahay manisa dia tononkalo no nanehoana ny fahitana ny toe-java-misy iainan’ny vahoaka sy nizaràna ny vaovao. Tohizana hatrany izany ary dia mindrana ny sanganasan’ireo poety hita eto amin’ny fesiboky isika.
Niarahana nanaraka teto fa nanome alalana ny prefe fa mahazo mampiasa ny kianjan’i Mahamasina ny antoko Tim izay hankalaza ny faha-15 taonany. Ny faran’ny volana jiona no nivoaka izany fahazoan-dalana izany. Nivadika ny volana jolay. Niova volana ilay manam-pahefana. Ka hoy Olivier Randrianatoandro :
Tena ialako tsiny aminareo vahoaka
Ilay izaho nanaiky dia avy eo indray nandà
Fa tsy sitrapoko ny hoe nanatsoaka
Fa izaho dia olom-pehezin-dry zalahy
Hitanareo izaho tamin’ny tele
Nangasihasy toa menatra be
Atao ahoana fa mena ambanin’ny mena
Izay baiko milatsaka eo dia ekena
Indroa nanao omeko tsy omeko anie izany ny manam-pahefana e. Nomeny aloha ny kianjaben’i Mahamasina avy eo dia tsy nomeny indray. Nasaina nankeny amin’ny coliseum ny tim dia avy eo dia norarana indray ny famoriam-bahoaka eto amin’ny distrika enina ato anatin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra.
Dia tsy niova hevitra intsony RaFanjakana fa tsy mahazo miditra ny kianja ny antoko tim raha nahazo nanao izany ny Hvm tany rehetra tany. Niakatra plateau mihitsy moa ingahy Minisitry ny Serasera nanazava lalana na tsy andraikiny aza izany fa eo ny Minisitry ny Filaminam-bahoaka na ny Minisitry ny Fitsarana manam-pahefana amin’izany kokoa.
RaMatahora izany no misy. Asa izay atahorana. Zary manontany tena ny mpikanto. Hoy tokoa Toky Baritafika Ramanankohajaina nanao hoe :
Anio 8 Jolay 2017
Fa inona ny olana ?
Iza no atahorana ?
No mampiasa miaramila
Sa misy ny tsy tiana ?
Hamoretana ny olona
Izay hifety fa tsy hitolona
Handihy sy hikorana
Sa tsy fantatrao izany ?
Fa hizara mofo mamy!
Io ve no atahoranao rangahy ?
Dihy kely mihetsiketsika
No dia basy no hasetry
An ireo hijery fety
Sa ho safotra mahita
Ity vahoaka maro an'isa ?
Hoy ny fanjakana
Nefa aiza izao izany
Rehefa nivoaka ny didim-pitsarana
Toa mbola noraràna
Ireo tampon’ny tanàna
Tsy ho fanohanana azy
Na fanomezako "courage"
Fa tsy misy ambonin’ny lalàna
Izay efa fantatrao tsara
Nefa odiana tsy hita sy hitsahina
Fa hoe baiko no narahina
Sa ny saina tsy ao tsara
Efa novidin’ny "au pouvoir"?
Izao no tadidio
Fa io toerana io
Tsy hateza fa handalo
Ka sao ho tonga ny andro
Fa ity Firenena
Anie tsy fanananao irery
Satria anananao ny hery
Fa Tanindrazanay Malala
Raha mbola i Madagasikara
"Zanahary o ! Tahio ny Tanindrazanay"
Sarotahotra. Dia hoy Vevetno nanolohana izany fahatahorana izany :
REZIMANTA NY AO AN !
Izao no tenin ilay jeneraly
Tsisy mibaiko ahy raha tsy i Mahafaly
Dia nanampy koa ilay kolonely
Midikidira ao raha te ho voavely
Ka nitsatsaingoka ilay komandà
Avia manantona raha sahy ialahy
Nibitabitaka ilay kapiteny
Dia haninona anefa raha zanak’i Neny
Nizesta be koa ilay lietnà
Tsy azo atao ny manao rassemblement
Fa tsy azon-tsampona ilay adjidà
Modia sao hahazo emmerdement
Nihiaka mafy ilay serzà
Mandehana mody izay non-partant
Nibetrobetroka ilay kaporaly
Ndehana mankao raha te hijaly
Ny sisa tenin’ireo vatatay
Izay baiko ihany no arahinay
Dia namaly ingahy Ravalo
Tsy maintsy tafiditra izahay amin’ny valo
Raha teo aza ny ramatahora tsy nihemotra ny antoko Tim fa niroso namakivaky ny tanana. Fantatra teny ampiandohana anie fa tsy ho ao amin’ny kianjaben’ny Mahamasina izy ireo. Ny fitaovana fanamafisam-peo tsy tao intsony fa efa réquisitionner. Na ny saribe aza efa nohongatana nialoha fa manaloka. Namakivaky ny tanana no azony natao. Dia hoy ilay poety efa notononina teo :
Fa izaho aloha manaiky fa maro ny olona
Betsaka ihany ianareo mpitolona
Ny anay nokaramaina isam-pokontany
Jereo ilay stade mbola tsy feno ihany
Fa teo aho dia lasa nody nitsaitsaika
Nanontaniana aho fa izaho mbola maika
Satria dia efa tafitako ilay hafatra
Ka ity fiarako ity izao hosoloina 4x4
Tsy nisy ny rombo. Tsy nisy ny vaky trano. Tsy sakoroka. Horakoraka saingy mbola lavitra ny horokoroka.
Dia hoy hatrany ny poety
Misaotra anareo aho tsy nanimba zavatra
Na dia nandalo teny Analakely
Fa ilay setroka kely mba hoe valin-kafatra
Aza atao am-po fa mba zesta kely
Na tsisy ny rombo, na tsisy ny sakoroka dia nisy kosa ny sono may tsy hay akory fa dia may e… Hoy i Olivier Randrianatoandro namarana tononkalo iray
Fa asa koa ty nanjo an i Rossy
Fa tapitra may avokoa ny matôsy
Natahotra ve ny sasany sao avy any no niainga ny fanamafisam-peo raha tafiditra tao ankianja ny zanak’i Dada ?
Tsy mitoloko fotsiny ihany ireo mpanakanto fa mitantara zava-misy tokoa.
Rehefa teny andalana dia niova ny tononkira ka ilay hoe « Ataovy hoe ny dihin’i Mijah » zary lasa hoe « Ataovy hoe ny dihin’ny prefe ».
Mbola hiova koa hatreto ny fidoboky ny feo hoy Rossy mampitandrina. Dia ahoana koa re ny manaraka…
Mitohy ny tantara.